ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးသတင်း Archives - Page4of 196 - Myanmar Fire Services Department
Tree fallen onto the Myinchan-Meiktila road, Myinchan township, Mandalay region
On 22.6.2021 at about 10 55, it was reported that tree fell onto the Myinchan-Meiktila road, No 13 ward, Mandalay region. At 11 00, fire personnel from Myinchan township fire station helped the locals to remove the tree which blocked the road. The operation was...
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ညောင်ဦးမြို့နယ်၊ ပုဂံနယ်မြေ၊ ရွှေဆံတော်-တာမဏေဘုရားသွား လမ်းပေါ်တွင် သစ်ပင်လဲကျမှုဖြစ်ပွာ� ....
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ညောင်ဦးမြို့နယ်၊ ပုဂံနယ်မြေ၊ ရွှေဆံတော်-တာမဏေဘုရားသွား လမ်းပေါ်တွင် ၂၀.၆.၂၀၂၁ ရက်နေ့၊ ၁၄ ၃၅ အချိန်ခန့်က လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့် လုံးပတ်(၃)ပေ၊ အမြင့်(၁၈)ပေရှိသော ထန်းနောင်းပင်သည် ဂွဆုံမှပဲ့ကျ၍ လမ်းပိတ်ဆို့မှုဖြစ်ပွားနေကြောင်း ပုဂံနယ်မြေ...
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ ကျောင်းကုန်းကျေးရွာ၊ ကံ့ကော်လမ်းတွင် သစ်ပင်လဲကျမှုဖြစ်ပွား
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ ကျောင်းကုန်းကျေးရွာ၊ ကံ့ကော်လမ်းတွင် ၁၉.၆.၂၀၂၁ ရက်နေ့၊ ၀၈ ၃၀ အချိန်ခန့်က လုံးပတ်(၄)ပေ၊ အရှည်(၃၀)ပေခန့်ရှိ ကုက္ကိုပင်သည် မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့် မြေပွ၍အမြစ်မခိုင်ဘဲ အမှတ်(၅၀၄/က)ရှိ ပိုင်ရှင် ဒေါ်သန်းထွေးနှင့် အမှတ်(၅၀၄/ခ)ရှိ...
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ မဟေသီလမ်းတွင် သစ်ပင်လဲကျမှုဖြစ်ပွား
ရန်ကုန်တိုင်းဒေကြီး၊ အရှေ့ပိုင်းခရိုင်၊ ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ မဟေသီလမ်း တွင် ၁၇.၆.၂၀၂၁ ရက်နေ့၊ ၀၉ ၀၀ အချိန်ခန့်က လုံးပတ်(၄)ပေ၊ အမြင့်(၃၀)ပေရှိ ကုကိ္ကုလ်ပင်သည် မိုးသည်းထန်းစွာရွာသွန်းမှုကြောင့် မြေပွအမြစ်မခိုင်ဘဲ ပိုင်ရှင် ဦးအောင်သန်းထွန်း ၏...
Page4of 196« « Previous...23456...102030...Next »